Politika fanondranana entana any Cebu Pacific vaovao
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Politika fanondranana entana any Cebu Pacific vaovao
Cebu Pacific dia nanitatra ny fanaovana andrana tsy voafetra hatramin'ny 31 martsa 2021
Mifanaraka amin'ny tanjona kendreny hanatsara ny fizotrany ho an'ny dia mahomby sy tsy mandeha amin'ny laoniny ho an'ny besinimaro, Cebu Pacific (CEB), dia manolotra politika vaovao amin'ny fikirakirana ireo enta-mavesatra voamarina
Manomboka amin'ny 1 Febroary 2021, CEB dia hampihatra politika vaovao hametra ny fetran'ny entan'ny maso amin'ny 39 santimetatra (manodidina ny 99 sentimetatra). Ny valizy miaraka amin'ity refy ity dia ho mora kokoa amin'ny fampitaovana amin'ny fehikibo, ary ho vokatr'izany dia hiteraka fiasa malama kokoa, hahatonga ny dia haingana sy mety kokoa ho an'ny mpandeha rehetra.
Ny entam-panamarinana izay mihoatra ny fetra 39 santimetatra (99cm) amin'ny lafiny iray dia sokajiana ho kitapo be loatra ary ny vahiny dia ampandoavina PHP 800 (eo ho eo. SGD 22) ho an'ny sidina anatiny, ary PHP 1,300 (eo ho eo. SGD 36) ho an'ny sidina iraisam-pirenena. Ity sarany fanampiny ity dia entin'ny fizotry ny tanana takiana amin'ny fitaterana ny kitapo mankany amin'ny faritra mavesatra entana. Ohatra sasany amin'ny entana be loatra ny fitaovana mozika, moto ary televiziona.
Ampahatsiahivina ny vahiny mba hanangona ny kitapony araka ny tokony ho izy amin'ny alàlan'ny enta-mavesatra napetrany mialoha mba hisorohana ny sarany hafa any amin'ny seranam-piaramanidina. Bebe kokoa i
Ny fitsapana COVID-19 voalohany mamantatra ireo karazana karazany novolavolaina tany Korea Atsimo